Muuse Biixi Waa Midnnimo Raadis W/Q: Maxamed Aadan Tarabbi
Sunday October 07, 2018 - 09:00:41 in Maqaallo by Wariye Tiriko
Fekerka ah Soomaalilaan inay go'do waxa sal u ah oo aynu isku ogayn dadkana u sheegi jirnay wuxuu ahaa:
- In Karaamadii reer Woqooyiga meel lagaga dhacay oo la yasay.
- In la ina Xasuuqay (Beesha Dhexe)
- In Siyaad Barre uu ku xadgudbay Diinta Islaamka.
- in Ingiriis ina Ilaalin jiray oo aynu calan ka qaadannay 26-june 1960kii.
Waxa la sheegaa siyaasiyiinta Soomaalilaan waxa ugu il dheeraa Maxamed Xaaji Ibraahin Cigaal laakiin Maxamed marka aad daraasayso 1955-2002 waxa kuu soo baxaya inuu ahaa qof caadi ah oo duruufaha siyaasadeed ku go'aan qaadan jiray sida 1960kii oo uu ku xasilay wixii markaa horyaallay iyo 1967- oo uu dhex mushaaxay korka sarana uga baxay laamihii SYL ee Dabaylaha IRIR iyo Daaroodku si dabiiciya u lulayeen, iyo sida uu ula macaamilay Maxamed Siyaad Barre oo xilal hoose u magacaabay. 1991 iyo shirarii Jabbuuti - amaba1993 go'aamadii uu qaatay xilligaas.
Anigu umalayn maayo in Muuse ka caqli wacan yahay Maxamed Xaaji Ibraahin Cigaal waayo duruufihii Tukaraq ayuu ku maareeyey " Majeerteen yaa cid ka yaqaanna"